महिलाहरुले किन गर्छन् सधैभरि भगवानको पुजा ? यस्तो छ वास्तविक रहस्य – Medianp
महिलाहरुले किन गर्छन् सधैभरि भगवानको पुजा ? यस्तो छ वास्तविक रहस्य
मिडिया एनपीप्रकाशित मिति: सोमबार, बैशाख ०२, २०७६१६:५४
काठमाडौँ । हिन्दु धार्मिक ग्रन्थ अनुसार देवताहरुलाई अनेक रुपले चिनिन्छ । धार्मिक शास्त्र अनुसा प्रेम लिला रचाउनेमा भगवान कृष्णलाई लिइएको छ भने कृष्णको आर्कषर्ण महिलाहरुमा रहेको बताइएको छ भने रामलाई कर्तव्य निष्ठ व्यक्तिको रुपमा लिइन्छ ।
अर्का एक शिव भगवान जसले महिलाप्रति केही रुचि नराखेपनि सतिदेवीको प्रेममा परेर ताण्डव मच्चाएका थिए । उनले आफ्नो प्रेम पार्वतीको लागि नै सर्मपित गरेका थिए । यद्यपी बाघको छाला लगाएर जंगली फुलले सजिएर भांग खाएर पागल बन्ने शिवको तपस्यामा अझै पनि महिलहरु व्रत बस्ने गर्छन् । यसरी सतिलाई गुमाएपछि पागल बनेर सृष्टिकै विनाश गर्न निस्केका शिव पुन माता पार्वतीको अद्भूत प्रेममा परेका थिए ।
उनी पार्वतीलाई सधैँ साथमा राख्ने गर्छन् । स्त्रीलाई छुन नडराउने उनी अर्धनारीश्वरको रुपमा आधा पार्वती र आधा भाग उनको रहन्छ । पौराणिक कथामा भगवान शिव र पार्वतीको सम्बन्धलाई बराबरी राखिएको छ । शिवले विष खाएको बेला पार्वतीले शिवले खाएको विष घाँटीमा नै रोकिदिएका थिए । त्यसकारण शिवलाई निलकण्ठ उपाधी मिलेको थियो । त्यति हुँदा पनि तीनै ताण्डाप शिव जस्तै पति पाउने आशमा महिलाहरु व्रत बस्ने प्रचलन अझै रहेको छ ।
पार्वती र शिवको प्रेम निकै प्रगाढ थियो । त्यसकै कारण होला माता पार्वतीले हरेक पटक विरोध गर्दा पनि शिव भगवान कहिल्यै रिसाएनन् । उनी पार्वतीको विचारलायृ सधै सम्मान गर्थे । उनीहरु दुैले एकअर्कालाई उत्तिकै प्रेम गर्थे । शिव महाकालीको चरणमा हुँदा पनि मुस्कुराइरहन्थे । शिवलाई सबैभन्दा क्रोध र उग्रताको प्रतिक मान्न्थ्यिो । तर एक पटक निकै डरलाग्दो बनेर काली माता निस्किइन् । त्यतिबेला काही देब , राक्षसले काली मातालाई रोक्न नसकेपछि भगवान शिवलाई कालीलाई रोक्न आग्रह गरेका थिए ।
त्यसपछि शिवले कालीलाई रोक्न बाटोमा नै सुते । तर महाकालीले कसैलाई केही प्रवाह नगरी शिवको छातीमा कुल्चिन पुगिन् । तब कालीको मन शान्त भयो । रुप देख्दा उदण्ड देखिने शिवलाई कसैले छोरी दिन चाहदैन्थे । उनी एक पति नभएर एक असल पुरुष थिए । उनमा यस्तो अद्भूत विशेषता थियो । जब बाहिर देख्दा जस्तो उनको भित्री व्यवहार त्यस्तो थिएन् । बुद्धिमानी, निश्चल, शान्त देव थिए । त्यसकारण महिलाहरुले शिवलाई अझैपनि शिव जस्तै पति पाउँ भन्ने आशमा पुजा आरधना गरिरहेका हुन्छन् ।
एनएमबी बैंकले आजदेखि सहारा बचत खाता सञ्चालन
नवलपरासीमा ज्येष्ठ नागरिक स्वास्थ्य बीमा
भाग्य जित्न जन्मिएका यी तीन राशी ! जो भाग्यले हैन परिश्रमले गर्छन् प्रगती !
ग्रहचक्रमा चन्द्रमाको उथलपुल ! हेर्नुहोस् कुन राशीलाई कस्तो असर पर्छ ?
महिलाहरुले रातको समयमा भुलेर पनि नगर्नुहोस् यी काम ! जसले गर्दा घर परिवारमा छाउँछ अशान्ति !
वास्तुशास्त्र अनुसार साताको यी दिनमा झुक्किएर पनि नटिप्नुहोस् तुलसीको पात ! जसको कारण घरमा अशुभ फैलिन्छ !
भगवान श्रीकृष्णले युधिष्ठिरलाई भनेका थिए !घरमा यी ५ चिज राख, हुनेछ शुभ ! हेर्नुस् के के हुन् ती चीज ?
सावधान ! हरेक दिन अशुभ हुने यी समयमा भुलेर पनि नगर्नुहोस् शुभ कामको सुरुवात !